Maktabadda music Apple
Qeybta 1: Sida loo isticmaalo Apple Music maktabadda aan iCloud?
Qeybta 2: Sida loo dar music ka ururinta gaar ah maktabadda Apple Music?
Labada Apple Music iyo Lugood Kulanka siiyaan dadka isticmaala si ay u helaan iCloud Music maktabadda oo waa madal u dhigma iyo koombiyuutarka oo u suurta galinaya in aad u helaan oo ay u isticmaali songs Mac oo dhan ee ah. Laakiin xaaladaha qaarkood, dadka waxaa laga yaabaa in aysan rabin in ay u isticmaalaan maktabadda iCloudmusic sida qayb ka mid ah ay xidhid Apple Music. Haddii aad tahay mid iyaga ka mid ah, markaas waa inaad tixgelisaa hab-gaar ah ama habka ay u isticmaalaan maktabadda Apple Music aan iCloud. Tani waxay aad u baahan doontaa in aad gab iCloud iyo sida loo sameeyo waxyaabaha soo socda waa:
Talaabada 1: On aad iPhone, iPad ama iPod Touch, in aad marka hore u baahan tahay inaad tagto app Settings ama doorasho ka dibna garaac Music. Haddii aad tahay user Mac ah, ka dibna aad marka hore u baahan doontaa in la furo Lugood on qalab aad.
Talaabada 2: tallaabada xigta waa in ay hoos u wad si aad goob iCloud Music maktabadda. Users Mac hadda u baahan doonaa si ay u tagaan Menu ee aad rabtid.
Talaabada 3: haatan mar aad gaarto meel maktabadda music iCloud ah, aad gab karaa doorasho iCloud by tuubada kaliya. Users Mac waa heli tab guud iyo jeeg ama uncheck iCloud maktabadda music ikhtiyaarka. Uncheck kiiska aanad rabin in ay ka mid iCloud.
Iyada oo xubin ka ah music Apple, waxaad heli fursad u dari aad ururinta music jira dhammaan qalabka aad. Waa maxay Apple sameeyaa waa in ay tilmaamaysaa oo dhan kuwan raadkaygay ka ururinta music shakhsi kuwa ka duwan yihiin buugga music Apple oo iyaga ka dhigaa inay isla laga heli karaa si aad si fudud ku helaan iyaga kartaa qalabka oo dhan in alla intii uu xubin ka yahay socda. Soo socda waa tallaabo by nidaamka tallaabo ku daray aad music gaar ah maktabadda music Apple.
Si aad ku dari kuwan raadkaygay ka Mac ama PC aad maktabadda music Apple:
Talaabada 1: waxa ugu horeeya ee ah in aad u baahnaan doonto inaad ku darto music ama kuwan raadkaygay ka PC ama Mac in aad maktabadda Apple Music waa inay la soo wareegto in aad Lugood account la ID Apple iyo password in aad la isticmaalo u Music Apple ah Xubin.
Talaabada 2: haatan loo hubiyo in aad maktabadda iCloud Music yahay. Haddaba tag in Menu Lugood isticmaalaya macmiilka desktop iyo guji icon la siin dhankiisii ​​midig iyo sare. Dooro 'dar file maktabadda' doorasho ka hoos hoos menu.
Talaabada 3: heli gabaygii / heeso aad rabto in lagu daro ka your computer oo furan Lugood. Hagaagsan faylka.
Talaabada 4: tan ah qaabab yar waxaa loo ogol yahay in la badbaadiyey on maktabadda music Apple, aad music la marsiiyey doonaa. Haddii la ansixiyo, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u abuuraan playlists muuqan. Ka dib markii heesaha waxaa ku daray in ay maktabadda music Lugood iCloud, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan nooc ka mid ah qalabka macruufka ah.
> Resource > Music > Apple Music Library